Saxaafada Soomaalida iyo Kacdoonka Laascaanood | maakhir.com
Saxaafada Soomaalida iyo Kacdoonka Laascaanood
November 1, 2007 in Somalia | Tags: saxafada, SOOL
Tan iyo intii dagaaladu ka dhaceen magaalada Laascaanood isla markaana magaaladaasi ay ka bilowdeen kacdoon shacab waxaa sii xoogeysanyey dhacdooyinka
joogtada ah ee dhexmara dadka shacabka magaalada iyo maaleeshiyooyinka iyo ciidamada Taageersan maamulka Soomaaliland.
Dhacdooyinkan oo isugu jira kuwo dhagaxtuur ah iyo xarig loo geysanayo dhalinyarada ku dhaqan magaaladaasi ayaa inta badan waxaa laga waayey warbixinadooda saaxafada Soomaalida inteeda badan.
Hadaba waxaa isweydiin muddan maxaa keenay in kacdoonka ka socda Laascaanood wax warbixino ah ay uga sooqaadan weyday inta badan saxaafada Soomaalida oo ku mashquulay xiisada Baydhabo ka taagan ee Siyaasadeed iyo waliba kooxaha hubeysan ee Muqdisho ka dagaalama.
Arrintan ayaa markii si gaar ah loogu kuurgalo ayaa waxaa kuu soo baxeysa in saxaafada qaarkeed aysanba awood ullahayn in ay falanqeeyaan dhacdooyinka muhiimka ah ee saameynta ku yeelan kara dalka Soomaaliya mustabalkiisa.
Xiisada ka taagan magaalada Laascaanood ee gobalka Sool, waxaa la oron karaa waa mida maanta ugu khatarsan ee ka jirta dalka Soomaaliya, maxaa yeelay waa mid bilow u ah dagaal balaaran oo dhexmara maamulka W/galbeed iyo maamulka Puntland oo hada diyaargarow xoogan ku jira.
Dagaalkan ayaa noqon kara mid ku fida deegaano badan oo hada nabad ah siiba kuwa ka tirsan maamulka la baxay Somaliland.
Marka laga yimaado arrintaasi, waxaa wax laga naxo ah dhacdooyinka joogta ah ee ka dhacaya magaalada Laascaanood iyo falalka bini’aadamnimada ka baxsan oo ay ku kacayaan maleeshiyaadka magaaladaasi ku sugan.
Shacabka Laascaanood ayaa si baaxadleh uga baro kacay magaalada, ayadoo inta magaalada kusoo hartayna ay kacdoon joogto ah oo dhagaxtuur ah ugala soo horjeedaan maleeshiyaadka soo dul fadhiistay magaalada.
Shacabka ayaa gebi ahaanba xiray goobihii ganacsiga, jidadkii la isu mari jiray, iskuuladii iyo goobihii kale ee dadka isugu imaan jiray ayagoo markaasi xooga saaray sidii ay magaalada uga illalsan lahaayeen maleeshiyooyinka hubeysan ee ku hanweyn ay la wareegaan maamulka magaaladaasi.
Shacabka ayaa khasaarooyin waaweyn ay kasoo gaaraan kacdoonkaasi ay wadaan, ayadoo in badan oo kamid ah dhalinyarada magaalada ay qafaasheen maleeshiyooyinka iyo ciidamada qaba dareeska Somaliland.
Dhalinyaradaasi oo illaa iyo hada aan la aqoon goobta lagu hayo isla markaana ay eheladoodu awood u waayeen in wax war ah laga siiyo halkii ay ku danbeeyeen.
Waxaan ayaduna lasoo koobi karin caga jugleynta iyo hanjabaada loo geysto shacabka magaalada kuwaasi oo maalin maalinta ka danbeysa ka dhiidhinaya falalkan lala beegsaday isla markaana ka doorbiday in ay kacdoonka sii wadaan halkii laga rabay in lagu curyaamiyo argagaxinta lagu hayo.
Hadaan usoo noqdo ciwaanka maqaalkan Saxaafada Soomaalida iyo Kacdoonka Laascaanood waxaa muuqata in labadaasi ay iska warqabin, isla markaana Saxaafada Soomaalidu noqotay mid kooban oo aan kasoo bixin magaalooyinka qaarkood isla markaana uu dareenkeedu dhaafsiisaneyn waxa ay sheegaan warbaahinta caalamiga ah ee aan sidaa ugu sii dhuuldaloolin marxaladaha dhabta ah ee ka jira dalka Soomaaliya.
« Mareykanka oo ka hadlay Somalia
Australia: Saamiyadii Range Resources oo hoos udhac weyn ku yimid Hadalkii Gen. Cadde Muuse Awgeed »